Mazhinji eSarudzo Yekutenga muB2B Inoitika Usati Wabata neKambani Yako | Martech Zone
Panguva iyo rimwe bhizinesi riri kubata bhizinesi rako kutenga chigadzirwa kana sevhisi, ivo vari zvikamu zviviri kubva muzvitatu kusvika makumi mapfumbamwe muzana yenzira kuburikidza nerwendo rwavo rwekutenga. Vanopfuura hafu yevatengi veB2B vanotanga nzira yekusarudza mutengesi wavo anotevera nekuita kumwe kutsvagisa zvisina kurongeka kutarisana nezvinetso zvebhizinesi zvine chekuita nedambudziko ravari kutsvaga.
Ichi ndicho chokwadi chenyika yatiri kugara mairi! Vatengi veB2B havana moyo murefu kana nguva yekumirira wako anobuda mutengesi anomiririra kuti aunze chigadzirwa chako kana sevhisi kwavari. Ivo vagara vatoziva dambudziko uye ivo vari kutotsvaga mhinduro yacho. Chikwata chako chinofanirwa kunge chiri kuburitsa inotsigira zvirimo uye kuvaka masimba mumasocial media uye mitsva yekutsvaga kuitira kuti iwe ugone kuvatora pakutanga muzvikamu zvekutsvaga. Ou
B2B Kutengesa kunogona kuomarara, uye kana iwe wakaita senge makambani mazhinji kunze uko, urikutenderera mavhiri ako kuyedza kutora mukutengesa nemaitiro echinyakare akabuda senge kufona kutonhora, tradeshows uye tsamba yakananga. Izvi infographic, B2B Kutengesa Kuchinja, Ichakuratidza kuti nei vashambadzi vakangwara vari kukurumidza kutsiva kwavo kwekutengesa kwekutengesa uye nzira dzekutengesa nenzira inbound. Iwe unofanirwa kuburitsa yakawanda inotungamira uye pakupedzisira yakawanda mari, uye iyi infographic inokunongedzera kune maturusi anogona kukudzosera munzira. Kubva Maximize Yemagariro Midhiya.
Vamwe vanhu vangade kuisa inbound seinotsiva kushambadzira kwekubuda. Handitende kuti ndiko kuenzanisa kunoenderana. Muchokwadi, ini ndinotenda musanganiswa weyakawanda inbound uye inobuda simba inowedzera mikana yako yekuvhara zvakanyanya. Zvemukati zvine hupenyu hukuru zvakare - infographic kana whitepaper inogona kutyaira inotungamira kwemakore, ichigonesa yako inobuda yekutengesa timu kuti itarise pakuvaka hukama uye kuvhara kutengeswa pane kungozivisa tarisiro.
Tags: b2b vatengi rwendob2b kushambadzirab2b sarudzo yekutengab2b tsvagiridzob2b kutengesavatengi rwendokutenga sarudzo